Steampunk dia mpilalao tantara an-tsirambina avy amin'ny siansa, ary ankehitriny ny fomba iray mampifangaro ny tantaram-pitiavan'i Victorian London, ny androm-piainana indostrian'ny taonjato faha-19 ary nalaina tamin'ny tantaram-pahaizana fanta-daza an'i Jules Verne sy Herbert Wells. Tsy ho ela izy dia hanao tsindry mavesatra avy amin'ny lamaody ary ho lasa foibe. Ny subculture steampunk ao anatin'ny roa taona manaraka dia hiala amin'ny sokajy "fialamboly" sy vokatra lafo vidy. Antenaina fa ny mpanao lalàna sy ny mpanamboatra ny firavaka sy ny akanjo dia hampiditra ny fomba fanangonana steampunk ao anatin'ny fanangonana ho avy. Midika izany fa tsy ho ela dia ho afaka hijery sy hividy ny singa izay lasa malaza, amin'ny fivarotana izay akaiky anao.
Ny mampiavaka ny endriky ny zazavavy steampunk dia kofehy, akanjo lava marevaka eny amin'ny gorodona, pataloha marefo, shorts, leggings, hatsikana kely, lamba malefaka ary lamba, karazana loko maro, karazany maro isan-karazany ary mahavariana. Aza manaisotra ny olona amin'ny fironana vaovao, anisan'izany ny fahazoana nalaza. Ny endriky ny hoditra, ny karazana fehezam-boninkazo mifangaro volamena, ny jiron'ny fanaingoana aviator, ny akanjo sy ny kiraro - ireo akanjo rehetra ireo dia hita ao amin'ny lehilahy steampunk maoderina.
Fiakanjo akanjo Steampunk
Raha manaitra an'io fomba io ianao, ary te-hamorona ny sarinao manokana amin'ny steampunk ianao, fantatrao fa tsy mora ny fialam-boly. Fa raha tapa-kevitra ny hanao zavatra ianao ary vonona ny handroso hatramin'ny farany, dia vonona ny hilaza aminareo momba ny endriny rehetra amin'ny akanjo amin'ny endriky ny steampunk.
Headdresses: cylinders, avenue, veils ary saron-doko.
Coats: lohahevitra ara-tafika sy saribakoly.
Jackets: zipo-bolo, marevaka, miaraka amin'ny kofehy.
T-shirt: ho an'ny vehivavy - satroka chiffon misy volombava sy kofehy manodina, ho an'ny lehilahy - tendron-tsekoly malaza, indrindra raha tsy misy tady.
Underwear: garters sy corsets.
Matetika izay ampiasaina matetika amin'ny famoronana sary: ​​velor, velvet ary dantelina.
Pants: afaka mampiasa olona ianao, afa-tsy jeans, izay heverina ho tsy dia mendri-pihetseham-po sy tsy mahazatra loatra amin'ny fomba. Matetika, toy ny fanampiny, ampiasao leggings.
Zana-trondro Steampunk: fohy na lava, miaraka amin'ny fako na fitting, miaraka amin'ny ruffles na embroidery - karazany sy loko isan-karazany dia mitovy amin'ny an'ny vanim-pirenena Victoriana.
Kiraro Steampunk: kiraro hoditra na kiraro avo, miaraka amin'ny kofehy ary eo amin'ny sehatra avo.
Fitaovana Steampunk: mody ho an'ny solon-drivotra tsirairay avy amin'ny aviator dia singa tsy azo ivalozana amin'ny sary steampunk, ary koa ny pocket watch. Matetika amin'ireo singa amin'ny firavaka steampunk no ahitanao ny fomba fiambenana, ny fitaovana, ny filaharam-be, ny kompà, ny sakana amin'ny fanalahidy sy ny singa hafa amin'ny endri-indostrialy. Ny ambin'ny sary, hatramin'ny finday sy ny finday, dia azo atao "horonan-tsary" mba hifanaraka amin'ny fomba fanao.
Make up steampunk
Raha ny makiazy sy ny haingon-koditra - ity fomba ity dia ahafahanao maneho ny toetranao ary tsy manana fepetra manokana - ny eccentric kokoa, ny tsara kokoa.
Amin'ny fampakaram-bady steampunk, amin'ny aloka, miezaka ny mampiasa pastel, volamena, metallika, volombava, manga ary fingotra kakahy. Ny loko dia tokony ho miloko loko ary tsy misy mihitsy ny neon, fa aza matahotra ny mandrotsaka izany amin'ny eyeliner, volo sandoka sy ny fehikibo mamirapiratra amin'ny endriky ny lamosina sy ny tavy. Ho an'ny lipstick - azonao ampiasaina ny loko matevina sy mavokely mba hanome loko voajanahary voajanahary na lozam-piravahana amin'ny molotrao mena sy burgundy. Noho ny hadisoam-panirano, ampiasao ny felam-boninkazo sy ny peach. Miaraka amin'ny makeup dia tsy ho diso mihitsy ianao, satria ao steampunk ny motera fototra dia ny fanontanianao.
Ny endriky ny fehezam-boninkazo ao an-dakilasy, angamba, dia iray amin'ireo fotoana tena mahaliana indrindra amin'ny fananganana sary. Perikopa, paompy sandoka, famafazana, akanjo marevaka, loko isan-karazany avy amin'ny mena mena ka hatramin'ny tavoahangy - izany rehetra izany dia afaka mameno tsara ny sarinao. Rehefa jerena ny zava-misy dia mbola Victoriana ny vanim-potoana, miezaha mifantoka amin'ny kofehy sy ny bobongolo. Aza mitsitsy ny varim-bazaha ary manamboatra haingon-doko avo, manamboatra azy ireo amin'ny menaka fisaka lehibe, volom-borona sy hatsikana, manavaka ny lamaody steampunk.
Na dia ny sary steampunk aza dia mety kokoa ho an'ny foto-drafitrasa foto-drafitrasa sy fisehoan-javatra toy ny amin'ny akanjo isan'andro, tsy misy olona ho gaga raha ny sasany amin'ireo singa ao anatin'ireo taona ho avy dia hampidirina ho toy ny an'i Kazhalu.
Steampunk dia azo ampiasaina ho fitaovam-pihetseham-po, mamela ny tenanao hidina an-tsehatra hafa, hamotsotra ny mpamorona anao any ivelany ary ho tafavoaka velona amin'ny fitaomam-piarahamonina siantifika. Ho an'ny steampunk tsirairay dia manana dikany manokana, saingy ny iray dia tsy miovaova: ny hakantony ary ny fisainana tsy misy fetra.
Ny fanamafisana ny volon'ala mavo 2016
Fashion Trends - Lohataona 2014
Modely kiraro 2015
Sary nalaina - spring-summer 2015
Lovely Wedding Dresses 2015
Hairy ho an'ny volo midadasika 2017 - fanavaozana lamaody sy fironana
Sakafo tsotra sy matsiro
Fanafody mampihetsi-po ao amin'ny tranon-jaza
Ny marina momba ny tsiron'ny goji noho ny fahaverezany
Tainkiry ny menaka volo ho an'ny volo
17 fanomezana tsy hay hadinoina ho an'ny ankizy
"Diniho, maka sary!": Tsy afaka manao sary ianao?
Inona no asehon'ny MRI amin'ny hazakazaka kirany?
Moske Hassan II
Herisetra amin'ny vehivavy - fitsaboana
Maskila tarehy mamelombelona ao an-trano
Karazana lamba manao ahoana no anaovana akanjo?
Diabeta telo andro
Ny soritr'aretina eo amin'ny vehivavy
Nahoana no nofinofy ny sipany vavy?
Salady kalsioma misy holatra